Adeegayaasha Cloud - Diiwaangelinta Domain Hosting Web
Thanks to hardware ka HP iyo Dell iyo tignoolajiyada isku xirka Cisco,
Waxaan bixinaa, goobta ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee lagu bixiyo adeegyada
of virtualization oo leh waxqabad sare
Waa maxay sababta aad u dooratay microchip.ch Cloud Servers
Badbaadada ugu badan ee macluumaadkaaga, xawaare badan oo soo rarista isticmaalayaasha boggagaaga
Goobahayagu waxay ku qalabaysan yihiin qalabka ugu fiican iyo farsamada software; Helitaanka xogtaada waxaa ilaalinaya dab-damisyo joogto ah oo la cusboonaysiiyay. Waxay ka shaqeeyaan goobta saacad kasta.
La qiyaasi karo
Haddii aad gaarto xadka Server-kaaga, u tag xalka sare hal gujin oo keliya. Haddii baahiyahaagu isbedelaan, waxaad xor u tahay inaad ku noqoto qorshihii hore wakhti kasta
Waxqabadka aaladahayada Linux si joogto ah ayaa loo falanqeeyaa oo loo hagaajiyaa, si loo siiyo mareegahaaga waqtiyo jawaab celin degdeg ah.
Baahi kasta oo horumarineed waxa jira xal ku habboon mashruucaaga. Qorshooyinkayagu waxay la qabsadaan xajmiga shirkaddaada, taageer luqadaha barnaamijyada aadka loo isticmaalo oo ay ku jiraan guddiyo maamul oo si sahlan loo isticmaali karo
Adeeg si buuxda loo cabbiri karo oo kula koraaya
1 IP taagan heegan u ah
1 Gbit/s bandwidth go'an
1 TB gaadiidka bishii
Xakameyn buuxda Ka soo jeeda Aagga Macmiilka
60 muuqaalada OS la dooran karo
WAQTIGA UGU HORREEYA 99.9%
Kaarka Shabakadda Gaarka ah Dheeraad ah
Firewall-ka lagala jaanqaadi karaa Aagga Macmiilka
Kaabta Toos ah ee Todobaadlaha ah
Kaydinta SAN + SSD Reundant
xarun xogeed la dooran karo
Kor u qaad / Hoos u dhigid hadba baahidaada
Online 5 daqiiqo gudahood
2 TB gaadiidka bishii
3 TB gaadiidka bishii
4 TB gaadiidka bishii
5 TB gaadiidka bishii
6 TB gaadiidka bishii
7 TB gaadiidka bishii
8 TB gaadiidka bishii
1 ka go'an Static IP
1 Gbit / s ee bandwidth go'an
9 TB oo taraafig ah bishii
Xakamaynta Dhamaystiran ee Goobta Macmiilka
60 Sawirrada OS la dooran karo
Kaadhka Shabakadda Gaarka ah ee Dheeraadka ah
Kor u qaad / Hoos u dhig si waafaqsan baahiyahaaga
* Liiska qiimaha dadweynaha marka laga reebo VAT.
Guddi kontorool oo degdeg ah oo fudud in la isticmaalo
Guddiga kantaroolka ee inta badan ay isticmaalaan kuwa doorta Linux kaas oo kuu ogolaanaya inaad habayso hawlaha Hosting. Waxaad soo rogi kartaa faylasha, rakibi kartaa codsiyada oo aad maamuli kartaa kaydinta wakhti aan dheerayn. Waxaas oo dhan iyo wax ka badan!
Waxaan bixinaa demo cPanel oo si buuxda u shaqaynaysa kaas oo kuu ogolaanaya inaad aragto sida ay u fududahay in la isticmaalo ka hor intaadan dalban codsigaaga.
Isku day cPanel